Funda ukuthi Ungasungula Kanjani Ikhredithi Yebhizinisi yenhlangano yakho
Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela ngezinhlelo eziningi zokwakha isikweletu senkampani. Singakunika izindlela zokuhlukanisa isikweletu sakho ebhizinisini lakho. Ngenqubo yethu ehlukile, sicindezela iminyaka ejwayelekile ye-4-6 ukusungula ibhizinisi futhi sithole isikweletu ngaphansi kwe-7 kuphela kuya ezinsukwini ze-14, sidala iphrofayili entsha yesikweletu ngokususelwa kunombolo yakho ye-ID Yentela kanye nekhono lokuthola iziqu.
Uma udinga i- $ 20,000 kuya ku- $ 400,000 noma ngaphezulu ngesikweletu, shayela noma ugcwalise lefomu ngakwesokudla.
Isiqinisekiso sethu: Uma ulandela uhlelo lwethu futhi singakutholi isikweletu ngeke kukubize nesenti.
Shayela i-1-888-444-4812 ngemininingwane
Ngaphezu kwalokho, nge Uchungechunge LLC, umuntu angaba nenkampani eyodwa futhi uchungechunge ngalunye lungasungula iphrofayili yesikweletu ehlukile. Lokhu kungangezelela inani lesikweletu umuntu angalithola ngenombolo yochungechunge umuntu akhetha ukulwenza.
Ngomumo wemali wamanje asinazo izinhlelo zalabo abanezikolo ze-FICO ezingaphansi kwe-640. Kulabo bantu, buza ngohlelo lwethu lokulungisa isikweletu.
Ungakhelwa iphrofayili yakho futhi unikezwe amathuluzi nezinsizakusebenza ukusungula ngokushesha isikweletu sebhizinisi - noma usenzele wonke umsebenzi. Sinikela ngohlelo olungamandla angama-95%, oluvumela ochwepheshe bezikweletu ezinkampani benze lo msebenzi. Bona Zonke Izinhlelo Zokubolekwa Kwezikweletu
Thola isikweletu sebhizinisi - Ukwehlukanisa isikweletu sakho sebhizinisi kunganikela ngezinzuzo ezilandelayo:
Imibandela Yokukhokha Engcono (I-Net 30 noma i-Net 60)
Amakhadi wesikweletu ebhizinisi
Ukuqashwa kwezimoto ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu noma isheke lakho siqu lesikweletu
Ukuqala kwebhizinisi nokukhula kwemali
Izindleko eziphansi, ukubuya okuphezulu
Lapho usuqale isikweletu sebhizinisi kungenzeka ukuthi uthole:
Imigqa yesikweletu Nemigomo Engcono Yokukhokha (Net 30 noma Net 60)
Amanani wenzalo ephansi
Ungasungula nini isikweletu sebhizinisi
Ithambile futhi elula, ufuna yakha isikweletu sebhizinisi ngaphambi kokuthi inkampani yakho iludinge! Asikho isikhungo esifuna ukuboleka, ukusebenzisana noma ukuthembela inkampani engakwazi ukufakazela ukuzinza kwayo kwezezimali. Njengomnikazi webhizinisi kufanele uqale ukucabanga ngokwakha umlando wesikweletu ngokushesha nje lapho ufaka. Ungakwenza lokhu ngokuthola inombolo yakho ye-D & B DUNS. Le nqubo kungenzeka, kalula nge-Corporation noma i-Limited Liability Company (LLC), bese usebenzisa inombolo yakho yokukhomba intela (i-EIN).
Lapho abaphathi nabanikazi besebenzisa amaphrofayili abo wesikweletu siqu ukuthola izikweletu noma ukuthola amakhadi esikweletu ebhizinisi, bazibeka engcupheni yokuba nesikweletu somuntu siqu, bese benza buthaka iveyili yenkampani ngokuhlanganisa ukuthengiselana kwezezimali. Kunezizathu ezimbili abanikazi bebhizinisi okufanele bazame ukungasebenzisi isiqinisekiso somuntu siqu kulesi simo.
Umsayineli ngamunye unesikweletu uma ibhizinisi lingakwazi ukukhokha
Izikweletu ezitholakele zebhizinisi zingaholela ekuthatheni impahla yomuntu siqu.
Khumbula, izilinganiso zezikweletu zebhizinisi zihlanganiswa ngendlela efanayo nezikolo zakho zesikweletu. Zakhiwa zisebenzisa izinto ezimbalwa, kufaka phakathi: isikweletu esikhona, inani lesikweletu esikhona elisetshenzisiwe, umlando wokukhokha, umlando wokuhamba kwemali, nezinye izinkomba eziningi zezezimali.
Ukuthola imigqa yesikweletu ebhizinisini inqubo esungulwa ngokuhamba kwesikhathi. Lapho ibhizinisi selimdala, kuzodingeka ukuthi likhethe ngaphezulu izikweletu zokwakha isikweletu futhi lithole imali mboleko ngaphandle kokusebenzisa iziqinisekiso zomuntu siqu. Ubudala buvumela amabhizinisi amaningi ukuthi akhombise ukwethembeka nokuzinza kwezezimali, kepha lokhu akufanele kuvimbele amabhizinisi amancane ekuzameni ukufaka isicelo sezintambo zesikweletu. Indlela engcono kakhulu ibhizinisi elincane elingakhombisa ngayo ukuthembeka kwalo ukuqinisa umbiko wawo wesikweletu se-D & B.
Yakha Izikweletu Zobumbano
Izinkampani Incorporate isungule uhlelo lokuhlinzeka ibhizinisi lakho ngamathuluzi wokukusiza ukuhlukanisa ibhizinisi lakho nezimali zakho. Ngokudala iphrofayili entsha yesikweletu ngokususelwa kunombolo yakho ye-ID Yentela.
Konke kuqala ngezethu Uhlelo Lokwakha Izikweletu, ezosungula iphrofayili entsha yesikweletu nemiphumela. Inhloso ukusungula amaphuzu wesikweletu ezinkampani angama-75 noma angcono. Uma kuqhathaniswa amaphuzu angama-80 afana nokuba nesikweletu somuntu siqu esingu-800: Lokho kuyisikweletu esihle kakhulu. Siqoqe sazenza zatholakala, izinhlelo zokuthola amaphuzu ngesikweletu kuma-ejensi abika ngokuyinhloko.
Amaphuzu esikweletu akhiwa ngokuba nemigqa yesikweletu, amakhadi esikweletu, ama-akhawunti nezinkomba zezohwebo ezibika kumahhovisi wesikweletu ebhizinisi. Emabhizinisini amaningi kunzima kakhulu ukuthola umbolekisi ozimisele ukunikeza izinhlobo eziningi zesikweletu sebhizinisi ngaphandle kweziqinisekiso zomuntu ngaphandle komlando wesikweletu sebhizinisi wangaphambilini. Uma unezinkomba zakho zokuhweba, sizosebenza nabo ukwakha amaphuzu. Kodwa-ke amabhizinisi amaningi adinga izinkomba ezengeziwe zokuhweba ezibika kuma-ejensi esikweletu azovula imigqa yezikweletu bese eqala ukubika kuma-ejensi amakhulu. Yize inqubo ivame ukuthatha isikhathi esichazwe ngenhla, kwesinye isikhathi izinyanga ezine kuya kweziyisithupha ziyadingeka kubathengisi ukuqinisekisa kahle kwi-ejensi ebikayo.
Sinikeza umhlahlandlela wokuthi ungakhetha kanjani izinkampani ezizonikeza ibhizinisi lakho ngesikweletu esisheshayo. Ingxenye yalolu hlelo ikusiza ngayo yonke inqubo yokufaka isicelo neyokubika kanye nokukhetha amabhizinisi azonikeza inkampani yakho udumo. Izinkampani esisebenza nazo zizobika okuhlangenwe nakho kokukhokha kumahhovisi esikweletu - futhi zinikeze imali mboleko ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu siqu noma isidingo sokuhlolwa komuntu siqu kwezikweletu.
Izinkampani zizimisele ukukhipha isikweletu ngoba amaklayenti abo awathathwa njengengozi enkulu. Isizathu sokuthi abathathwa njengengozi enkulu kungenxa yokuthi abanikazi bebhizinisi banesifiso sokwakha isikweletu sebhizinisi labo ngokutshala imali kuhlelo lokwakha izikweletu lwenkampani.
Siyilungu leDun & Bradstreet Credibility Corp.